Ezinye ze ingxelo endiyifumene kubafundi kukuba khange ndibonelele ngengxelo eninzi malunga nokubhloga kwi Martech Zone. Ke-namhlanje bendicinga ukuba ndiza kuthatha indlela eyahlukileyo kwaye ndijonge itekhnoloji ejikeleze inkqubo yakho yokubhloga ukubonelela abafundi ngoluhlu lweempawu zokuphonononga kunye nokuqinisekisa ukuba ibhlog yabo inayo.
robots.txt -Ukuba uya kwingcambu (idilesi yesiseko) yedomeyini yakho, yongeza iirobhothi.txt kwidilesi. Umzekelo: https://martech.zone/robots.txt - ngaba ikhona ifayile apho? Ifayile yeerobhothi.txt yifayile yemvume esisiseko exelela i-injini yokukhangela i-bot / spider / crawler ukuba yeyiphi imikhombandlela ongayihoyiyo kunye nokuba yeyiphi imikhombandlela yokukhasa. Ukongeza, unokongeza ikhonkco kwimephu yendawo yakho kuyo! Awunayo enye? Vula incwadana okanye incwadi yokubhaliweyo kwaye uyenze ngokwakho… landela nje imiyalelo Robotsxt.org
Sitemap.xml Imephu yesayithi eveliswe ngamandla yinto ephambili ebonelela ngeinjini yokukhangela nge imephu ukuba uphi umxholo wakho, ubaluleke kangakanani, kwaye ugqibele ukutshintsha nini. Ngowona mvelisi mhle wesayithi endakha ndawusebenzisa yile I-XMUMX ye-Sitemap Generator ye-Arne Brachhold. Ikwangenisa imephu yesayithi kwi-Live / Bing, Yahoo!, KuGoogle kwaye ubuze! (xa inkonzo yokungenisa uBuza isebenza).
inkcazelo -Ukuba ndifike kwelinye lamaphepha akho ebhlog yakho, ndingazi ukuba ibimalunga nantoni? Ngamanye amaxesha kunzima ukuxelela ngokufunda isithuba. Ukuba nenkcazo emnandi kwibar esecaleni yakho ukuba loluphi uhlobo lomxholo owunikezelayo lunokubaluleka ekufumaneni abafundi ukuba babhalise okanye babuye.
Malunga nephepha - Ungubani kwaye kutheni kufanele ndikuthembe? Nokuba uziva uhlekisa ukubhala iphepha elithetha ngeempumelelo zakho… ayisiyakho, yeyabatyeleli. Banike isikhokelo malunga nokuba kutheni bekufanele bakumamele.
Umqondiso Ngokufika kwezikhangeli zeethebhu, kulula kakhulu ukwahlula ibhlog yakho ngokongeza i icon. Ukuba awazi ukuba njani, sebenzisa nje i Umvelisi weFavicon ukwenza ifayile ye-ico (icon) kwaye uyilayishe kulawulo lweengcambu lwewebhusayithi yakho. Ezinye iifayile zemifanekiso zinokusetyenziswa ngokunjalo, okanye imifanekiso okanye ii-icon ezibanjwe kwenye indawo-hlaziya nje ifayile ye- Ikhonkco le-icon emfutshane entlokweni yakho.
Ukudityaniswa kweMithombo yeendaba -Posa nge Twitter kunye Hootsuite, Qhagamshelwa, Imirhumo ye-imeyile, I-Facebook kunye nokudityaniswa sisixhobo esinamandla, sebenzisa ulwalamano kobona buchule obukhulu!
Enkosi ngekhonkco kunye noluhlu olukhulu lweengcebiso. Unenqaku elisemthethweni malunga nenkcazo kunye ne-disclaimer. ndizoyongeza kwibhlog yam ngokunjalo 🙂.
NgoJulayi 22, 2009 ngo-5:13 PM
Olu luhlu oluhle. Ndinenqaku elibi elivuzayo kumxholo omnye, ndiza kuqengqeleka isibini kwezi kunye kwaye ndidibanise umva ngetyala.
NgoJulayi 22, 2009 ngo-11:32 PM
Kutshanje ndiye ndaxela malunga nokuba kunzima kangakanani ukufumana iinkcukacha zoqhakamshelwano kwiibhlog kwaye andivumanga nawe ngakumbi. Yintoni ingxaki enkulu? Emva koko – oops – ndiye ndafumanisa ukuba andinandlela ilula kwaye ndongeze.
NgoJulayi 23, 2009 ngo-2:29 PM
Uninzi lweengcebiso ezilungileyo apha, kunye 'nokukhangela' okulungileyo kwiibhlogi. Enkosi!
Ashish @ Magik Imixholo
Amacebiso amahle Douglas, ndicinga ukuba kufuneka wongeze oku kulandelayo kwi-robots.txt yakho ngokunjalo
# Ukusetwa kweCrawlers
# Umatshini woLondolozo lwe-Intanethi weWayback
Ummeli womsebenzisi: ia_archiver
Jonga i-log yakho yokufikelela kwaye Ungavumeli ezi zigcawu kuba ziba i-bandwidth yakho kwaye zenze indawo yakho ingafumaneki kubatyeleli okwethutyana.